Life Style Archives - Bright News
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ကလေးငယ်များရဲ့ပုံစံနဲ့ဘ၀များကို ရိုက်ကူးဖော်ပြတဲ့ ဓာတ်ပုံများ(၁၇)ပုံ
Massimo Bietti ဟာ အီတလီဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့လှည့်လည်ကာ နိုင်ငံအရပ်ရပ်က ကလေးငယ်များရဲ့ ပုံများကိုရိုက်ကူးတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အိန္ဒိယ ၊ ရှရှား ၊ နော်ဝေး နှင့် အခြားနိုင်ငံပေါင်းများစွာက ကလေးငယ်များနဲ့ ဆုံတွေ့လည်ပတ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွေဟာ ဝေးလျံခေါင်းပါးတဲ့ အရပ်ဒေသတွေကရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ရုပ်ပုံတစ်ခုခြင်းစီတွင် သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘ၀ ပုံစံတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ (၁)ဗနူးတူး […]
ဖြူးကောင် ပုံစံကိတ်မုန့်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြ​ သူ​တွေရဲ့ မ​အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဟာသဓါတ်ပုံများ
အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုတွင်ကောင်းမွန်လာလျှင် ပို၍ ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ရမယ့်အချိန်ကတော့မလွဲမသွေရောက်လာမှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မုန့်ဖုတ်ခြင်းကိုသာဥပမာယူပါ။ ကိတ်မုန့်ကိုမဖုတ်ခင်သင်အနေနဲ့ကိတ်မုန့်ဖုတ်နည်းများကိုအစားအစာဘလော့ဂ်များတွင်လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်းလက်တွေ့မှာတော့လုပ်ကိုင်ရတာထင်သလောက်မလွယ်ကူလှဘူးဆိုတာကိုယခုဖော်ပြပေးမယ့်ပုံရိပ်တွေကသက်သေပြပေးပါလိမ့်မယ်။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. […]
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အကောင်းဆုံး ဆယ်ဖီပုံများ-ဓာတ်ပုံ(၂၂)ပုံ
သင့်ဖုန်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာ ပျင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သူများအတွက် – လူတစ်ချိူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတီထွင်ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်မှုဟာ လုံး၀ပြီးပြည့်စုံလှတယ်ဆိုတာကို ဒီဆယ်ဖီပုံတွေက သက်သေပြနေပါတယ်။ (၁) Selfie တုတ်တီထွင်ခဲ့ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သင့်ကို မပျင်းရိစေပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ပြနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ရေလှိုင်းစီးကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရုံသာမက အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်တဲ့ […]
စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ အလွဲတွေကို ဖော်ပြထားသော ဟာသဓာတ်ပုံများ – (၂၇) ပုံ
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပဟေဠိဆန်လှပါတယ်- သာယာလှပတဲ့ရှုခင်းများ ၊ မယုံနိုင်စဖွယ်ပုံရိပ်များ နဲ့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော အခြေနေများ ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဂျိူဟန်နက်စ်ဘတ်ရှိ စူပါမားကတ်တစ်ခုက ရေခဲသေတ္တာအတွင်းတွင် ၄ မီတာရှည်တဲ့ မြွေကြီးတစ်ကောင်ကို လူတစ်ဦးက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (၂) Avengers ပရိသတ်သာဆိုလျှင် ဘာကွဲပြားနေလဲ သိလောက်မှာပါ။ […]
IQ 10000လောက်ရှိတဲ့ဖြတ်ထိုးဉာဏ်‌ ကောင်းသူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အရာများ-ဓာတ်ပုံ(၃၀)
ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်ဘ၀တွင်နေထိုင်ဖို့ လျင်မြန်လှတဲ့ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနှစ်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကူးစက်ရောဂါကိုသာကြည့်ကြည့်ပါ။ရောဂါမဖြစ်ခင်က ကာလကို သင်မှတ်မိပါသလား။ လူတွေနဲ့နီးကပ်စွာနေခဲ့ကြပြီး လက်များကို သေချာမဆေးကြောခဲ့မိကြဘူး ။ အခုတော့ တစ်ခုခုကိုင်ပြီး လက်မဆေးကြောမိရင် တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေမိကြပါပြီ။အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဟာလည်းပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ ရူပ်ထွေးတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေမလိုအပ်ပါဘူး။ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ဟာ ဘယ်လောက်ခေါင်းစားရလဲဆိုတာတော့ တစ်ချိူ့လုပ်ရပ်တွေက လုံး၀စိတ်မချရပင်မဲ့ အလုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဖော်ပြထားသလို သင်လိုက်ကြိုးစားကြည့်ပါက […]
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိသလောက်ရှားပါးတဲ့ သူရဲကောင်းလို့‌ေခါ်ရမည့် လူတစ်ချိူ့ဟာ သူတစ်ပါးဘ၀များကို တိုးတက်လာ စေအောင်ကူညီဖေးမတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အကူညီလိုအပ်နေတဲ့ မည်သူ့ကိုမဆို (သို့မဟုတ်)ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ တိရစ္ဆာန်များကို ရှောင်ရှားခြင်းမပြုပဲ ကူညီနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ (၁)ဒီကလေးမငယ်လေးဟာ သူ့သူငယ်ချင်းကို မနိုင်မနင်း ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ (၂)ရေစိုပြီး မပျံနိုင်တဲ့ ကျီးကန်းကို လေမှုတ်စက်ဖြင့်အခြောက်ခံကူညီပေးနေသူတစ်ဦး (၃)ဒီမိန်းမကြီးဟာ မိဘမဲ့ကလေးတွေ အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ […]
အချိန်အားနေသူတွေ ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် အရာများ
သင်ရဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုဖို့ နည်းလမ်းများစွာရှိသည့်အနက် တစ်ချိူ့နည်းလမ်းတွေကတော့ လက်၀င်ပြီး အကျိူးမရှိလှပါဘူး။ (၁)ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးကိုပုံဖော်ထားပုံ (၂)အလုပ်အချိန်မှာပျင်းနေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး (၃)အနာဂတ်တွင် အင်ဂျင်နီယာလောင်းဖြစ်မယ့် ကလေးတစ်ယောက် (၄)sexy ကျတဲ့ကြောင်ကလေး (၅)တိုက်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဘဲနော် (၆)Tip moneyကိုပုံမှန်ပေးရတာရိုးတဲ့လူတွေအတွက် (၇)Mike Tyson၏ ပုံကို computer Excel file မှာဆွဲရတာက အလုပ်လုပ်တာထက်ပိုစိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ် (၈)အလုပ်အားနေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် […]
နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ အခက်အခဲများစွာအတွက် အလွန်အသုံးတည့်သော တီထွင်မှုများ
တီထွင်မှုများနဲ့အတွေးအခေါ်တွေဟာ လက်တွေ့လူ‌ နေမှုဘ၀ ရဲ့ဆန်းသစ်မှုများကို ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီမှာဖော်ပြ ပေးမယ့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို မြင်ပြီးနောက် မှာတော့သင့်အ‌ အနေနဲ့ အသုံး၀င်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို လိုချင်မိမှာအမှန်ပါပဲ ။မကြာခင် ဒီပစ္စည်းအများတော်တော်များများကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်မိမှာပါ။အောက်မှာတော့ဘာတွေကအရမ်းအသုံးဝင်နိုင်မယ့်ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။ (၁)‌ ကားနောက်ခန်းထိုင်ခုံမှာ အလွယ်တကူအိပ်စက်နိုင် တဲ့လေအိတ်မွှေ့ယာ (၂) သင့်အိမ်တံခါးများကို သော့တံမသုံးပဲ ဖွင့်နိုင်တဲ့ Lockitron App […]